यौन सम्पर्कबाटै ठिक हुन्छ यि रोगहरु ! हेर्नुहोस् – Idea Khabar
आइडिया खबर२०७६ आश्विन ५, आईतवार १६:०५
काठमाडौं – वैज्ञानिकहरुले यौनसम्पर्क गर्दा टाउकोको दुखाई तुरुन्तै ठिक हुने नयाँ तथ्य पत्ता लगाएका छन् । उनीहरुले सेक्सलाई टाउको दुखाईको अचूक औषधि भनेका छन् ।
वैज्ञानिकहरुले सेक्स गर्दा टाउको दुखाईबाट राहत मिल्ने र साथै पार्टनरसँग पनि निकटता थप बढ्ने भएकाले यो विधि अपनाउन आग्रह गरेका छन् । एजेन्सी
एउटीलाई धोका दिने केटाले अर्कीलाई धोका दिने सम्भावना कति हुन्छ ? जान्नुहोस्
२०७६ कार्तिक ९, शनिबार ११:१९
२०७६ आश्विन १, बुधबार ०३:०५